Lalao 6 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (31 Janoary) | Vaovao IPhone
Saika hamita ny volana voalohany amin'ny taona 2017. Ao anatin'ny telopolo andro monja dia maro amin'ireo fanapahan-kevitra noraisintsika tamin'ny Taom-baovao no tavela ho an'ny vatan'ny fahatsiarovana izay, ao anatin'ny iraika ambin'ny folo volana, dia ho vovoka indray izy ireo. Na izany aza, ny tanjonay hitondra anao tolotra sy fihenam-bidy hahazoana lalao sy fampiharana maimaimpoana mitazona izany. Androany maraina dia nijery ny App Store aho ary izao no hitako.
Fampiharana maimaim-poana ny sary, famokarana, hanatsarana ny endrika ara-batana na lalao sasany handoavana ny fotoana. Ity lisitry ny lalao sy fampiharana maimaimpoana ity dia mitondra kely amin'ny zava-drehetra, ary amin'ny tsiro rehetra. Fa raha tsy manintona zavatra hitanao ianao dia tsarovy ny mitsidika anay matetika satria miova isan'andro ny tolotra.
1 Remote Control, Keyboard ary Trackpad an'ny Mac [PRO]
2 Stationery - meme Design Glitter sy Monogram ho an'ny Crafty Preppy DIY Girl
3 Hampidina ho toa PDF
5 Fanatanjahan-tena (fampihetseham-batana 7 Minute Body Fitness)
6 Z Hero
Remote Control, Keyboard ary Trackpad an'ny Mac [PRO]
Raha izaho ianao, dia hajanoko ny famakiana amin'izao fotoana marina izao ary tsy handany fotoana faharoa afaka maimaim-poana amin'ny fampiharana ity, «Remote Control, Keyboard ary Trackpad ho an'ny Mac [PRO]».
Izy io dia fampiharana mahasoa izaitsizy, indrindra rehefa tsy ao an-trano ianao dia mila miara-miasa amin'ny Macbook ary tsy manana ny Mouse Mouse, satria "Mamadika ny iPhone sy iPad anao eo ho eo ho an'ny remote universal ho an'ny Mac-nao".
Amin'ity fampiharana ity dia hanana trackpad sy keyboard ivelany ianao isaky ny mila izany ianao ary afaka mifehy ny volanao amin'ny Mac, playback amin'ny Spotify, iTunes, sns., Mandefa sy manakatona fampiharana ary maro hafa.
To use Fanaraha-maso lavitra Mila solosaina Mac fotsiny ianao izay mitondra macOS 10.7 na avo kokoa, ary apetraka eo amboniny ilay rindranasa "Helper", izay azonao atao maimaimpoana ihany koa. eto, na amin'ny fanarahana ny torolàlana ao anatin'ny fampiharana.
Remote Control, Keyboard ary Trackpad ho an'ny Mac [PRO] dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro (izay efa tena tsara ho an'ny mahasoa azy sy ny fahombiazana tsara arosony), saingy azonao atao izao ny mahazo azy io maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Stationery - meme Design Glitter sy Monogram ho an'ny Crafty Preppy DIY Girl
Afaho ny zavaboary izay entinao ao anatiny fampiharana fanovana sy retouching sary amin'izay hanomezanao endrika tsy manam-paharoa ny sarinao.
Ny vidin'ity app ity dia 0,99 euro, kanefa, afaka mahazo maimaim-poana tanteraka ianao amin'ny fotoana voafetra.
«PDF it All dia fitaovana hanovana sy hizarana rakitra PDF. Hanova Word, Excel, antontan-taratasy Powerpoint, pejin-tranonkala, fifandraisana, hafatra, mailaka. Izany rehetra izany ao anatin'ny segondra, mamorona PDF matihanina. »
Hampidina ho toa PDF Izy io dia manana vidiny mahazatra 3,99 euro, saingy azonao atao maimaim-poana tanteraka izany mandritra ny fotoana voafetra.
Monogram dia fampiharana izay azonao atao mamorona rindrambaiko manokanas ho an'ny iPhone na iPad amin'ny fomba haingana sy mora.
Monogram Izy io dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro, saingy azonao atao maimaim-poana tanteraka izany mandritra ny fotoana voafetra.
Fanatanjahan-tena (fampihetseham-batana 7 Minute Body Fitness)
Fampiofanana isan'andro fito minitra dia ho ampy zahao mandritra ny fahavaratra. Tandremo anefa fa mety tsy ho mora araka ny efa noeritreretinao an-tsaina izany. Faharetana, fikirizana be dia be no ilainao.
Mikotrana Izy io dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro, saingy azonao atao maimaim-poana tanteraka izany mandritra ny fotoana voafetra.
Ary mazava ho azy, tsy afaka namita izahay raha tsy nampidirina kilalao Anisan'ireo fampiharana maimaim-poana amin'ny andro, tsotra nefa mampiankin-doha. Manandrana ve ianao?
Z Hero Izy io dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro, saingy azonao atao maimaim-poana tanteraka izany mandritra ny fotoana voafetra.
MAHALOHIDY: tadidio fa ny tolotra rehetra teo aloha dia Fotoana voafetra. Ny hany azoko antoka anao dia ny fanentanana manan-kery amin'ny fotoana famoahana ity lahatsoratra ity, na izany aza, tsy fantatray hoe rahoviana izy ireo no hifarana. Noho ny antony tsotra dia kely izany: tsy manambara daty fiafaran'ilay tolotra ireo mpandraharaha, noho izany tsy azonay fantarina. Noho izany, ary araka ny lazaiko matetika hoe "misintona aloha, avy eo mieritreritra." Total, maimaim-poana izany 😉.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Lalao sy fampiharana 6 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (31 Janoary)
Ny Yalu Jailbreak ho an'ny iOS 10.2 dia navaozina indray ary mifanaraka amin'ny iPad Air 2 sy iPad Mini 4 izao